उत्तर कोरियामा खानाको अभाव, मकैको मुल्य सुनेर झस्किए किम !
एजेन्सी। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले दुई दिन अघि देशमा खाद्यान्न अभावको चेता’वनी दिए । उत्तर कोरियाले विगतमा ग’म्भीर भो’कमरीको सामना गर्नु परेको छ र अब फेरि खाद्य सं’कट सम्बन्धी चेता’वनी जारी गरिएको छ।
उत्तर कोरियाबाट विश्वसनीय जानकारी प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ। यो देशले आफ्नो अधिकांश मामिला गोप्य राख्छ। त्यसो भए उत्तर कोरियामा भोकमरीको अवस्थाको बारेमा के जानकारी छ र किन यो वर्ष यो एकदमै ख’राब हुन सक्छ? साधारण खाद्यान्न वस्तुहरूको बेतहाती मूल्य बढ्दै गरेको सामग्रीको अभावको स्पष्ट संकेत हो।
उत्तर कोरियामा आफ्नो सम्पर्कहरू मार्फत डाटा सँकलन गर्ने वेबसाइट एनके डेलीका अनुसार, उत्तर कोरियामा मकैको एक किलोको मूल्य फेब्रुअरीमा ३१३७ वोन (KRW) पुगेको छ। यो दुई किलोग्राम प्रति किलो बराबर हो। स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने केही सामग्रीको भाउ पनि पछिल्ला केही महिनामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।
आलुको मूल्य पनि बढेको प्योङयोङका वासिन्दाहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार अन्य गैरप्रमुख खाद्यवस्तु कालो चिया ७० डलरसम्म खरिद गर्न सकिन्छ भने एक प्याकेट कफी १०० डलरभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ ।
यसअघि, बीबीसीको रिपोर्टमा त्यहाँ एक किलो केराको नेपाली पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गरेको बताइएको थियो ।बैठकमा किमले खाद्यवस्तुहरुको अ’भाव कुन स्तरसम्म रहेको भनेर विस्तृतमा खुलासा गरेनन् । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनको प्रक्षेपणानुसार उत्तर कोरियामा आठ लाख ६० हजार टन खाद्यान्नको अ’भाव छ, यो देशव्यापी रुपमा दुई महिनालाई पुग्ने खानेकुरा हो ।
केही समयअगाडि स्थिति यति ख’राब बनेको थियो कि किमले सबै जनतालाई ‘क’ठिन मार्च महिना’का लागि तयार रहनसमेत आग्रह गरेका थिए, जसले १९९० को दशकमा उत्तर कोरियाको र भो’कमरीलाई जनाउँछ । त्यस समय यसले देशभर लाखौँको ज्या’न लिएको बताइन्छ ।
जनतासामु भगवान् समान मानिँदै आएका किम परिवारका लागि केन्द्रीय रुपमा स्थापित आर्थिक योजनाले जनताको पेट भर्न नसक्नु भनेको धेरै ठूलो स’मस्या हो । तर, आफ्नो बुवा र हजुरबुवाको विपरीत किमले आफ्ना यस्ता कमजोरीहरु न’डराइ सबैमाझ स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
यसअघि, उनी सर्वसाधारणको अगाडि पहिलोपटक आँसु झा’र्दै मा’फी समेत माग्दै गरेको देखिएका थिए ।किमले सुरुवातदेखि नै आफूलाई ‘जनताको मान्छे’का रुपमा छवि स्थापित गराएका छन् । ना’गरिकको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
सन् २०११ मा सत्तामा आएदेखि नै उनले आफ्नो एक मात्र लक्ष्य उत्तर कोरियाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको बताउने गरेका छन् । तर, आ’णवि’क ह’तियार कार्यक्रम अ’न्त्य नगर्ने र देशभरका एक लाख बढी राजनीतिक कै’दीहरुलाई रि’हा गर्न इच्छुक नहुनुले किमको सो योजना पूरा गर्न धेरै हिसाबमा सहज देखिँदैन ।
यता, अमेरिकासँगको सम्बन्ध र आर्थिक प्र’तिबन्ध ह’टाउनेसम्बन्धी छलफल अहिले किमका लागि धेरै टाढाको विषय बनेको छ । तर पनि उनले बिहीबारको महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकमा यसबारे उल्लेख गरेका थिए । त्यहाँको राष्ट्रिय समाचार संस्था केसीएनएका अनुसार किमले वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको उत्तर कोरियाली नीतिबारे विश्लेषण गर्दै अहिलेका लागि प्योङयोङले वार्ता र ध’म्की दुवैका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका हुन् ।
तर पनि उनको यो भनाइ गत महिनाकोभन्दा कम आ’क्रामकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।यसअघि, उनले अमेरिकालाई अनियन्त्रित सं’कट निम्तिने चे’तावनी दिएका थिए । जनवरीमा किमले अमेरिकालाई उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूलो श’त्रु ठ’हर गरेका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किमबीच २०१९ मा भएको ऐतिहासिक सम्मेलनमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि उत्तर कोरियाले आफूहरुप्रतिको आक्रामक नीति न’हटाएसम्म अमेरिकासँग वार्ता गर्न इच्छुक नभएको जनाउँदै आएको छ । यता, बाइडेन प्रशासनले आफ्नो विदेशी एजेन्डामा उत्तर कोरियाको आ’णविक कार्यक्रम र मानवअधिकार उ’ल्लंघनको मु’द्दा आफ्नो नीतिको महत्वपूर्ण अं’श हुने स्पष्ट पारेको थियो ।
यसअघि, उत्तर कोरियासँगको भविष्यकै लागि भनेर जापानी प्रधानमन्त्री यो’शिहिदे सुगा र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इन अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए । यसरी ह्वा’इटहाउसले उत्तर कोरियासमक्ष ट्रम्पभन्दा फरक र व्यावहारिक रणनीति अपनाउने बताइरहे पनि उत्तर कोरियाले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्न सकेको छैन । किम जस्तैगरी बाइडेनका पनि हाल अरु नै प्राथमिकता र चु’नौतीहरु छन् ।
२०७८ असार ७, सोमबार २३:५२ गते 1 Minute 899 Views